Askari ka tirsan booliska oo toogasho isku dilay – The Voice of Northeastern Kenya
Askari ka tirsan booliska oo toogasho isku dilay
Askari ka tirsanaa ciidamada booliska oo ka howl gali jiray magaalada Kisumu ayaa lagu soo waramayaa in uu dhintay kadib markii uu xalay si ula kac ah isugu dhuftay rasaas.
Alfred Ndalana oo ahaa dable ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaanno Trafiic-ga, waxaana uu ku sugnaa xarunta dhexe ee ciidamada booliska gobolka Nyanza.
Askarigaan ayaa ilaa 5 xabadood madaxa isaga dhuftay, iyadoo qaar ka mid ah asxaabtiisa ay isla shaqeeyaan ay sheegeen in tallaabadaasi uu qaaday kadib markii uu cabsi xoogan ka muujiyay natiijada ka soo baxeysa turxaan bixintii dhawaan lagu sameeyay ciidan uu isaga ka mid ahaa.
Saraakiisha iyo askarta la turxaan bixiyay ayaa wajahayay baaritaanno ku saabsan hantida ay leeyihiin, si loo xaqiijiyo qaabkii ay kusoo gashay in uu yahay musuqmaasuq iyo in kale.
Wararka qaar ayaa sheegaya in askariga is dilay uu wajahay cadaadis ku saabsan in uu sharaxaad ka bixiyo hantida lacageed ee uu heysto taasoo markii la turxaan bixinayay loo sheegay in aysan isla ekeyn dhaqaalaha si shar ahaan ah u soo gala iyo lacagta uu heysto.
Hase ahaatee Mr Ndalana oo xiligaas is difaacayay ayaa gaashaanka ku dhuftay in uu si khaldan dhaqaale u helay balse uu lacagahaasi ka helay nin ganacsade ah oo ku sugan Kisumu kaasoo uu adeegyo u sameeyay.
Si kastaba, Ciidamada booliska ee gobolkaasi ayaa hadda billaabay baaritaanno qota dheer oo ku aadan dhacdadaan, iyadoo aysan jirin wax warqad igeysiis ah oo uu qoray askariga is dilay.
← Kooxda Al-Nusra Front oo xiriirka u jartay ururka al Qaacida
Arsenal oo lagu soo waramayo in ay wada hadalo kula jirto Valencia →